Windows License – NETWARE CO.,LTD.
#1 IT Service Provider
Windows License အကွောငျး သိကောငျးစရာ
ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံမှာ Microsoft Windows ကို license version သုံးတဲ့သူ အနညျးငယျသာရှိပါတယျ။ Windows license ရဲ့ဈေးဟာ အမွငျ့ဆုံး ဒျေါလာ ၂၀၀ ဝနျးကငျြခနျ့ရှိနိုငျတာကွောငျ့ လူတိုငျးဝယျသုံးနိုငျဖို့ အတှကျတော့ သိပျမလှယျကူသေးတဲ့ ကိစ်စပါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံကို Microsoft ကတော့ ခွခေနြပွေီ ဖွဈပါတယျ။ သိပျမကွာခငျ အခြိနျတှငျးမှာ Copy Right Law တှနေဲ့အတူ ကြှနျတျောတို့ အားလုံး license version ကို မဖွဈမနေ ဝယျသုံးရတော့မယျ့ အနအေထားကို ရောကျလာပါတော့မယျ။
Windows License Version အသုံးပွုတဲ့အတှကျ ရနိုငျတဲ့ ကောငျးကြိုး တှကေတော့ မိမိရဲ့ Windows ကို အမွဲ Update ပွုလုပျနနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ နစေ့ဉျ Hackers မြားမှ Zeroday exploit မြားကို ရှာဖှကော သတိမပွုမိသေးတဲ့ ယိုပေါကျတှကေတဆငျ့ Windows မြားကို တိုကျခိုကျ ထိုးဖောကျ ဝငျရောကျ လြှကျရှိပါတယျ။ Zeroday exploit ဖွဈတဲ့အလြှောကျ Antivirus တှကေလညျး မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး။ Windows ရဲ့ File ယိုပေါကျတှကေို အသုံးပွုပွီး ထိုးဖောကျမှုတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါ နောကျဆုံး ထှကျရှိထားတဲ့ Security patch တှကေို update လုပျပွီးပဲ ကှာကှယျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိ ကှနျပြူတာကို Hijacking လုပျခံထားရတယျ ဆိုရငျတော့ မိမိ အသုံးပွုသမြှကို စောငျ့ကွညျ့ နနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့ Bank အကောငျ့ အသုံးပွုတာ Email အသုံးပွုတာကအစ နောကျဆုံး Webcam, Microphone ကနတေဆငျ့ မိမိရုပျနဲ့ အသံကိုပါ စောငျ့ကွညျ့နနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Windows license အမြိုးအစား သုံးမြိုးရှိပါတယျ။ Retail, OEM နဲ့ Volume license တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ Retail license ကတော့ ကြှနျတျောတို့ ဆိုငျတှေ ဒါမှမဟုတျ Microsfot store ကနေ တဈဦးခငျြး အသုံးပွုဖို့အတှကျ ဝယျတဲ့ license မြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့အောကျမှာမှ Home တို့ Pro တို့ ထပျခှဲတာဖွဈပါတယျ။ OEM ကတော့ Acer တို့ Dell တို့က ရောငျးတဲ့ ကှနျပြူတာ တှမှောပါတဲ့ Preinstalled Windows တှပေဲဖွဈပါတယျ။ Volume license ကတော့ အဖှဲ့အစညျးတှကေ အရညျအတှကျ မြားမြားဝယျယူ အသုံးပွုတဲ့ license မြိုးပဲဖွဈပါတယျ။ License တဈမြိုးခွငျးစီမှာ သတျမှတျထားတဲ့ စညျးကမျးတှရှေိပါတယျ။ မိမိ အသုံးပွုနတေဲ့ license ဟာ ဘယျလို license မြိုးလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့အတှကျ Command Prompt မှာ slmgr –dli လို့ရိုကျကွညျ့ပွီး စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ မိမိ ကိုယျပိုငျအိမျသုံးဖို့ အတှကျ ဆိုငျကနဝေယျလာတဲ့ Laptop မှာ Volume license အမြိုးအစား ဖွဈနတေယျဆိုရငျတော့ မှားရှငျးနပွေီလို့ သတျမှတျရနိုငျပါတယျ။
Windows License အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ Microsoft Windows ကို license version သုံးတဲ့သူ အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ Windows license ရဲ့ဈေးဟာ အမြင့်ဆုံး ဒေါ်လာ ၂၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိနိုင်တာကြောင့် လူတိုင်းဝယ်သုံးနိုင်ဖို့ အတွက်တော့ သိပ်မလွယ်ကူသေးတဲ့ ကိစ္စပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကို Microsoft ကတော့ ခြေချနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင် အချိန်တွင်းမှာ Copy Right Law တွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး license version ကို မဖြစ်မနေ ဝယ်သုံးရတော့မယ့် အနေအထားကို ရောက်လာပါတော့မယ်။
Windows License Version အသုံးပြုတဲ့အတွက် ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး တွေကတော့ မိမိရဲ့ Windows ကို အမြဲ Update ပြုလုပ်နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် Hackers များမှ Zeroday exploit များကို ရှာဖွေကာ သတိမပြုမိသေးတဲ့ ယိုပေါက်တွေကတဆင့် Windows များကို တိုက်ခိုက် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် လျှက်ရှိပါတယ်။ Zeroday exploit ဖြစ်တဲ့အလျှောက် Antivirus တွေကလည်း မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ Windows ရဲ့ File ယိုပေါက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ထိုးဖောက်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားတဲ့ Security patch တွေကို update လုပ်ပြီးပဲ ကွာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ ကွန်ပျူတာကို Hijacking လုပ်ခံထားရတယ် ဆိုရင်တော့ မိမိ အသုံးပြုသမျှကို စောင့်ကြည့် နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Bank အကောင့် အသုံးပြုတာ Email အသုံးပြုတာကအစ နောက်ဆုံး Webcam, Microphone ကနေတဆင့် မိမိရုပ်နဲ့ အသံကိုပါ စောင့်ကြည့်နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows license အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Retail, OEM နဲ့ Volume license တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Retail license ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်တွေ ဒါမှမဟုတ် Microsfot store ကနေ တစ်ဦးချင်း အသုံးပြုဖို့အတွက် ဝယ်တဲ့ license မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အောက်မှာမှ Home တို့ Pro တို့ ထပ်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်။ OEM ကတော့ Acer တို့ Dell တို့က ရောင်းတဲ့ ကွန်ပျူတာ တွေမှာပါတဲ့ Preinstalled Windows တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Volume license ကတော့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အရည်အတွက် များများဝယ်ယူ အသုံးပြုတဲ့ license မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ License တစ်မျိုးခြင်းစီမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ license ဟာ ဘယ်လို license မျိုးလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့အတွက် Command Prompt မှာ slmgr –dli လို့ရိုက်ကြည့်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ မိမိ ကိုယ်ပိုင်အိမ်သုံးဖို့ အတွက် ဆိုင်ကနေဝယ်လာတဲ့ Laptop မှာ Volume license အမျိုးအစား ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ မှားရွင်းနေပြီလို့ သတ်မှတ်ရနိုင်ပါတယ်။
No 002, Building 009, Aung Chan Thar Complex, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
+959263727219
သငျ့ Password ကလုံခွုံမှုရှိရဲ့လား …… ?? …
Free Things of Internet
အှနျလိုငျးပျေါမှာ အလကားရတိုငျး ကောငျးလား / …
Way to Create Password
သငျ့ Password ကိုလုံခွုံအောငျ .. သငျ့ အကောငျ့ပေါငျး …
Windows License အကွောငျး သိကောငျးစရာ …
Office Trend Prediction -+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ …
NETWARE COMPANY LIMITED © All rights reserved. 2015 - 2018